Ukukhubazeka Kwezingulube - Ukufuywa eNingizimu Afrika
Ukukhubazeka yinkinga enkulu ekukhiqizeni ingulube. Ubuhlungu obuhlotshaniswa nokuzikhukhumeza kungenza kube nzima ukuba izingulube zihambe ekudleni nasezindlini zamanzi, okuzokwenza kube nomthelela omubi ekukhuleni kwabo, inhlalakahle yabo futhi kubangele ukucindezeleka okubenza babe nezifo eziningi.
I-Lameness nayo inegalelo elibi ekukhiqizeni futhi isungulwe njengesizathu esikhulu kunazo zonke, emva kwezinkinga zokuzala, ukuthi kungani kuhlwanyelwa khona ngaphambi kwesikhathi.
Umhlahlandlela wokukhiqiza we-Pork Producers 'Organisation (SAPPO), amaPig for profit, ubonisa ukukhukhumeza, ukuhamba ngezinkinga, izingulube zithinte unyawo olulodwa emhlabathini, izingulube zenqabe noma zingakwazi ukuvuka emhlabathini noma zihudule izindlu zazo ezinamaqabunga namalunga ukuvuvukala noma ukufudumala ukuthinta njengezibonakaliso eziyinhloko ukuthi kukhona okungalungile.
Ukubona izinyawo, izinyawo kanye nezinkinga emuva, abalimi kufanele bashukumise zonke izingulube ukuba zime bese zibuka indlela abahamba ngayo futhi behamba ngayo. Kunakekelwa okukhethekile kulabo abalala phansi kuqala.
Izinyawo zezingulube nazo kufanele zihlolwe njalo ukuze zibone okungavamile. Ama-pig anezinyawo ezincane nezidumbu ezinkulu, ngakho-ke izinyawo zazo ziba nzima noma zizwakala ubuhlungu, ikakhulukazi uma zikhulelwe futhi kufanele zithwale ubunzima kunomthwalo ovamile. Ucwaningo luye lwabona ukuthi iningi lokuhlwanyela lithinteka yizinyawo, ngakho-ke ukwelashwa okusheshayo kubalulekile ukuvimbela izinkinga ezinkulu.
Isihloko se-Pig Site sika Ukuhleleka kwama-pigs kusikisela ukuthi abalimi banikeza inhlanyelo yokulinganisa okuyi-zero kuya kwezintathu, ngokusekelwe kalula ukuhamba endaweni ehlanzekile, eyomile, ephezulu, eqinile. I-score of zero ingabhekisela kumuntu ongapheliyo, kanti amaphuzu okumele agcinwe yizilwane ezinokukhubazeka ngokuzithoba, ngamanye amazwi, ezihamba ngokukhululekile, kodwa zingase zivele ziqinile.
Amaphuzu amabili angasetshenziselwa ukuhlwanyela okukhubazeka ngokulinganisela. Wayengasebenzisa izinyathelo ezimfushane noma azibophezele, kodwa abe nesisindo esithombeni esithintekayo. Amatsatfu kufanele asetshenziselwe umhlwanyelo okhubazeka kakhulu, futhi awuthathi isisindo kumalungu afanelekile futhi udinga isikhuthazo sokuhambisa.
Nakuba ukuzinyala kungabangelwa ukungazalwa komzimba noma ukuthuthukiswa, kubangelwa ikakhulu ubuhlungu obuhambisana nezifo, ukulimala okuhlobene nokuhlukunyezwa noma izifo eziphansi. Ngokusho kwe-The Pig Site, izilwane zezilwane zibonisa ukuthi abalimi bafaka i-tray egcwele umquba owomile kuhlelo lwe-elektroniki lokuhlwanyela ukuhlwanyela ukuhlwanyela ukuma lapho bedla. I-lime iyoma futhi ikhumbuze izinyawo njalo lapho umhlwanyeli ungena esiteshini, okungasiza ekuvimbeleni ukukhubazeka okubangelwa izilonda zokuhlunga.